စိတ်ဖိစီးမှုပျောက်စေဖို့………….(^^) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » စိတ်ဖိစီးမှုပျောက်စေဖို့………….(^^)
Posted by thit min on Sep 30, 2011 in Community & Society, How To.. | 13 comments
ဆယ်မိနစ်အတွင်း (Stress)စိတ်ဖိစီးမှု ပျောက်နည်း
လူတို့သည်အခြေခံစားဝတ်နေရေးပြည့်စုံရန်၊ ပိုမိုတိုးတက်သောဘဝတခုတည်ဆောက်နိုင်ရန် တိုးတက်သောခေတ်နှင့်အမှီလိုက်ရန် ပညာရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေးကိတ်စများနှင့် ရှုပ်ထွေးလှစွာအတွေးများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ရစရာပေးစရာကိတ်စများ၊ ပြဿနာများ၊ အမှုအခင်းများ၊ ဒေါသဖြစ်စရာများ၊ စိတ်အလိုမကျစရာများ၊ ဖြင့်(ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ခံစားနေရမှုမျိုးမဟုတ်ပဲ )တဖြေးဖြေးအနည်ကျလာသော ပုံစံမျိုးဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုတခုခုရှိလာတတ်ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုမပြေပျောက်နိုင်ခြင်းမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြေဖျောက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေခြင်းလဲအကြောင်းရင်းတခုဟု ကျနော်ကိုယ်တွေ့အရပြောဆိုလိုပါသည်။ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲများပြားလှသော လုပ်ငန်းတာဝန်များကြားတွင်မကြာခဏဆိုသလိုဒီပရက်ရှင်
အဆင့်မရောက်သော်လည်း (စိတ်အားထက်သန်စွာအလုပ်လုပ်လေ့ရှိသော) ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်”ရှာ”လို့မရအောင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခံစားရပါသည်။ သို့နှင့်ရီးဒါးဒိုင်ဂျက်စာစောင်(၂၀ဝ၄ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်) အဟောင်းလေးတအုပ်ဟိုလှန်ဒီလှန်နှင့် (အများအားဖြင့်တော့ဟာသပဲဖတ်တာပါ ဒီမန်းဂေဇတ်မှာခဏခဏ အဲဒီဟာသတွေ ဘာသာပြန်ရေးခဲ့တာသတိပြုမိကြမယ်ထင်ပါတယ်) ဖတ်ကြည့်ရင်းစာတပုဒ်ကို စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်။ ရေးသူက　Peter Jaret　ဆိုသူ။ “ဆယ်မိနစ်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု ပျောက်နည်း(Stress Free in 10 Minutes )” တဲ့။ ခုနှစ်ချက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ လေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်နဲ့အသုံးတဲ့ရင်သုံးရတာပေါ့။ သူပေးထားတဲ့ခုနစ်ချက်ပေါ်ကနေ ကျနော်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်နော်။
တနေ့တာရဲ့အချိန်တွေထဲက ၅ မိနစ် ဖြစ်နိုင်ရင် ၁၀ မိနစ် ဘာမှမစဉ်းစားပါနဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ကအသံ ဗလံတွေနားထောင်ပါ။ ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်ကလည်ပင်း၊ ပခုံးနဲ့လက်မောင်း၊ ရင်ဘတ်အစရှိတဲ့နေရာ တခုခုမှာအာရုံစူးစိုက်ထားလိုက်ပါ။ အရေးကြီးတာက ဘာကိုတွေးမိမနေဖို့ပါပဲတဲ့။ အဲဒီနည်းလေးက အာရုံကိုစုစည်း တတ်လာအောင်ပြန်လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အတိတ်ကိုပြုပြင်လို့မရတော့သလို၊ အနာဂတ်ကိုလဲခန့်မှန်းလို့မှ၊ မရတာမလို့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ အရေးပါတာကိုမမေ့ဘို့ပြောပရစေ။ အဲဒီပစ္စုပ္ပန်ကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ရင် ခင်ဗျားအိုကေပီပေါ့ဗျာ။
ဒါကတော့လူတော်တော်များများသိပြီးသားမို့မရှင်းတော့ပါဘူးဗျာ။ လူပြက်ကြီးမရယ်နိုင်ဆိုတဲ့ဟာသလေးကိုတောင် သတိရလိုက်မိတယ်။ (ဆရာဝန်ဆီလူတရောတ်လာတယ်၊ ကျနော်စိတ်ညစ်လို့ဘာလုပ်ရမလဲဆရာ၊
ဆိုတော့ ခင်ဗျားခုဟိုပြဇာတ်ရုံမှာ ကပြနေတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးရဲ့ပြဇာတ် သွားကြည့်လိုက်ပါကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လိုပြောတော့ ဟိုလူကဆရာပြောတဲ့လူရွှင်တော်ဆို တာကျနော်ပါခင်ဗျာ)ဆိုတဲ့ဟာလေးကြားဘူးကြမှာပါ။ တကယ်စိတ်ညစ်လာ၊ စိတ်ဖိစီးလာရင်မရယ်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ကျနော်မောင်သစ်မင်းလိုဘဝကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြတ်လာခဲ့သူကအဲဒီခံစားချက်ကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲစိတ်ဖိစီးမှုရပါစေ ကျနော်အခက်အခဲကို”ရယ်ပြီးပြောတတ်အောင်”ကျနော်လေ့ကျင့်ထားတယ်။ ပြီးတော့ဟာသတွေဖတ်တယ်၊ သီချင်းတွေကို ဖျက်ပြီးရီစရာဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတယ်။ ကျနော်ရယ်စရာကောင်းအောင်ဖျက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကိုယ်ဟာကိုပြန်ရယ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကသစ်မင်းကိုယ်ပိုင်စတိုင်လေးပေါ့။ ဘာဘယ်ဖြစ်ဖြစ် ဟာသ ဖတ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရီစရာတွေဝိုင်း ဖွဲ့ပြောပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မန်းဂေဇတ်ကဟာသလေးတွေပြန်ဖတ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရယ်ပါမယ်လို့စဉ်းစားထားပါဗျာ။
3. တီးခတ်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်နားထောင်ပါ၊
ဒါလဲတော်တော်များများလုပ်ကြမှာပါပဲ၊ ဂစ်တာ၊ အော်ဂင်တီးတတ်သူတွေပိုအဆင်ပြေတယ်။ သီချင်းနားထောင်တာကတော့တကယ်လုပ်သင့်တာပဲ။ သစ်မင်းကလိုက်အော်ဆိုတာကိုပါအကြံပေးချင်တယ်။ (“အဆိပ်ခွက်ပါပဲချစ်သူရေ~ဟေ~~ဟေ~~ကိုဗညားရေဆက်ဆွဲရအောင်ဗျာ”/ဘာညာပေါ့/ ဟစ်ပလိုက်တာမျိုး) ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်တော့ ကိုယ်ဗောလ်လယွမ်းတော့ကိုယ်ချိန်ပေါ့ဗျာ။
တနေ့ကို၅မိနစ်လောက်တွေးပေးဘို့လိုမယ်တဲ့ဗျ။ ဒါလဲတော်တော်လုပ်သင့်တယ်ဗျ။ ကျနော်လုပ်မိနေတတ်တယ်။ .။ ဥပမာဗျာထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုခရီးတွေသွားမယ်ဆိုတာ မျိုး၊ ဘယ်လိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေလုပ်ပလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေ တွေးတာဗျ။ လက်ရှိဘဝရဲ့ကိတ်စဝိတ်စတွေနဲ့မဆိုင်တာမျိုးကိုေ တွးတာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ ခုလက်ရှိဘဝကအကြောင်းတွေတွေးရင်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ “မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ”ဆိုတဲ့ရီပို့တ်ကြီးပဲခင်ဗျားပြန်ဖတ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ လူဆိုတာလက်ရှိဘဝကိုကြေနပ်နေသူကရှားတာကိုးဗျ။ ကျနော်မောင်သစ်မင်းအယူအဆကတော့ ငါဘယ်လိုနေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာအတွေးထက်၊ ငါအဆင်ပြေရင်သူတပါးကို ဘယ်လိုကူညီပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာအတွေးမျိုးကို ထောက်ခံချင်တယ်၊ လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်။
၁၀ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်တာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ပါးစေပါတယ်တဲ့။ အဲဗျ အကြွေးရှင်အိမ်ဘက်ကိုတော့ရှောင်ရမယ်ဆိုတာလဲမမေ့နဲ့အုန်းကိုယ့်လူ။ အပေါ်ကတချက်၊ နှစ်ချက်နဲ့ ပေါင်းလုပ်လို့လဲရတယ်ဗျနော်. ဘာကိုမှမစဉ်းစားပဲစိတ်အေးလက်အေးလေးဖြစ်ဖို့ကပွိုင့်နော်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် ၁၀ မိနစ်အချိန်ကိုယူပါ။ အသက်ရှူခြင်းထုတ်ခြင်းကို ၁၀ စက္ကန့်လုပ်ပါ၊ ဆိုလိုတာက ရှူသွင်း ၅ စက္ကန့် ရှူထုတ် ၅စက္ကန့်ပေါ့။
7 .အိပ်ယာထ အိပ်ယာဝင်မှာ မှာဖြေလျော့ပါ
မနက်အိပ်ယာကနိုးနိုးခြင်း၊ ၅ မိနစ်လောက်ဘာကိုမှမစဉ်းစားပဲကိုယ်ခန္ဓာ ဟိုးအောက်ပိုင်းခြေချောင်းလေးတွေကစပြီး ခြေထောက်၊ ပေါင်၊ ဝမ်းဗိုက်၊ လည်ပင်း၊ မျက်နှာ၊ ဦးခေါင်းအထိဖြေလျော့ပါ။ ငါတကိုယ်လုံးပေါ့ပါးသွားပြီ၊ စိတ်ရောကိုမှာပါလေးလံမှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့စဉ်းစားပြီးလုပ်ရမှာပါ။ အိပ်ယာဝင်ချိန်မှာလဲတကြိမ် ပုံစံတူလုပ်ပါ။ (အဲဒီ ရီလက်စ်ဇေးရှင်းကတော့ဆရာမင်းသိင်္ခရဲ့ မြေရှောက်ဝိဇ္ဇာေ ရွှမြသာစာအုပ်ထဲဖတ်ဘူးပါရဲ့) တခုခုကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ရင်ကို မဆိုးပါဘူး။ အကုန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိနစ်၇၀ ဒါမှမဟုတ် တနာရီလောက်အချိန်ယူရမှာပေါ့ဗျာ။
ကိုယ်တတ်နိုင်တာလေးရှိရင် စိတ်ပါလက်ပါသူတပါးကိုကူညီခြင်းပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေရဲ့အဓိကတရားခံ၊ မြစ် ဖျားခံရာက အတ္တ မဟုတ်လားဗျာ။ အတ္တကိုဗဟိုပြုစဉ်းစားနေသ၍တော့ စိတ်တွေရဲ့ဖိစီးမှုအကျဉ်းအကြပ်ကလွန်မြောက်ဘို့ မလွယ်နိုင်ပါဘူး။
ငါ ငါ ငါ နဲ့ ငါ ကိုငါက အကျဉ်းချ ဘဝမလှပြီ လို့ဆိုပါရစေခင်ဗျာ။
ကိုးကား။ ။ Reader’s Digest (Feb,2004)
တကယ်တော့..စာပြင်တာမှာစာတွေကို EditPlus ဆိုတဲ့.. ပရိုဂရမ်ရေးတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲပေါ်တင်ပြီး… .search/Replace နဲ့.. ပုဒ်မ၊ပုဒ်ထီးအကုန် နောက်က စပေ့(Space)တခုထည့်ခိုင်းလိုက်တာပါပဲ..။ ပြီးမှကျန်တာနည်းနည်းလိုက်ညှိတယ်ပေါ့.။
ကျမ Reader’s Digest မှာဖတ်မိတုန်းက ဒီလောက် အာရုံမရဘူး။ ဆရာ ပြန်ရေးထားတော့မှ ( ဥပမာလေးများ
နဲ့ အတူ) ပို အသက်ဝင်သွားတော့သကိုး။ စာကြောင်းတွေ ရှည်ထွက်နေတာကလွဲလို့ ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။
စိတ် ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက် တစ်ကယ့်ဆေးဝါး အစစ်ပါ ။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်၊ လူလတ်ပိုင်း တွေအတွက် တစ်ကယ်လိုအပ်လို့ပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရင်တော့ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ ပွားများပါ စီးဖြန်းပါလို့ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ ပြင်းထန်တဲ့ stress မျိုး မခံစားဖူးပေမယ့် တခါတလေ စဉ်းစားတာတွေများပြီး (လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး) ဘယ်ဟာကို ဆုပ်ကိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ဖူးတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ပါ MaMa ခင်ဗျား…
မေတ္တာသုက်ကို ဂြိုလ်သက်အလိုက် ၇ ရက်ရွတ်တာ၊ကိုးနဝင်းအဓိဌာန်၊ပုတီးစိတ်အဓိဌာန၊်သီလကိုအထူးစင်
ကြယ်အောင်နေထိုင်တာ၊ကစလို့တရားထိုင်တာ၊၀ိပဿနာ ဘာဝနာ ပွားများခြင်းများဟာလဲ
အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်(Stress)ရနေတဲ့အခါလွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပြုံးဖို့တောင်ခက်နေတဲ့သူတယောက်အဖို့ကိုယ်စိတ်ကို”ထပ်ချုပ်ပြီး”နေရမဲ့တရားထိုင်တာ၊၀ိပဿနာ ဘာဝနာ ပွားများတာမျိုးလုပ်ရခက်လေ့ရှိတဲ့
ကျွန်တော့ကိုခင်ဗျားသိနေလို့ ဒီအချိန် ဒီစာကိုရေးလိုက်တာလားဗျာ၊
ကျွန်တော် လတ် လော စိတ်ဖိစီးမှုတွေ တော်တော်ခံစားနေရတယ်
ကျွန်တော်ခံစားနေရတာတွေ ဖြေဖျောက်နိုင်ဖို့ ဒီစာဖတ်ပြီးကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်။
အဲဒီ အချက် ၇ချက်ထဲက ၃ချက်လောက်ကတော့ ကျွန်တော် လုပ်နေကျဖြစ်နေတာပါ…
ကျန်တဲ့အချက်တွေကို လဲ သုံးကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်း .. စိတ်ကသာ အဓိကကျတယ်… စိတ်ကကြည့်လင်နေရင် အလုပ်အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်..
အခုလိုနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပြောပြပေးလို. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော့..
အားရပါးရ ရယ်ပါလို့ ဆိုထားလို့ 
အားရပါးရ ရယ်ဖို့ ဆိုတာကလဲ
တော်တော် ကို မလွယ်တဲ့ အလုပ်ဗျ
ဟာသရေးဘာသာပြန်ဆရာ မောင်ကောင်းထိုက် ကိုယ်တိုင်
ဆရာဝန် နဲ့ သူ့ အကြောင်း ရေးတာကို ဖတ်ခဲ့ရလို့ ပါ
ဟာသတော်တော်များများ ကို သိပြီးနေရင်
အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရှေ့မှာ
တစ်ခါတစ်လေ မရီချင်ပဲနဲ့ 
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး က လဲ
ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံး ကို ပဲ
စိတ်ချမ်းသာဖို့ ဖတ်ကြစို့ http://www.mediafire.com/?dgmyziydvmz